ကတ်ကြေးကသင့်ဆံပင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သလား။ Split Ends ကိုရှောင်ပါ - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ကတ်ကြေးကသင့်ဆံပင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သလား။ Split Ends ကိုရှောင်ပါ
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 08, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 3
သင်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါ့ပေါ့ဆံပင်အလှပြုပြင်သူဖြစ်စေ၊ ဆံပင်ဖြစ်စေ၊ အိမ်တွင်းဆံပင်အလှပြုပြင်သူဖြစ်စေပဲငါတို့ဖြတ်တောက်တဲ့အခါမှာလက်ျာဘက်ကတ်ကြေးတစ်စုံရှိခြင်းရဲ့အရေးကြီးမှုကိုငါတို့အားလုံးသိတယ်။
အများကြီးကသင့်ရဲ့ကတ်ကြေးတွေမှားယွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်တစ်ထည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်မေ့လျော့။ မေ့လိုက်သောအခါတစ်ခုခုမှားသွားနိုင်သည်။
ပုံမှန်အိမ်၊ မီးဖိုချောင်၊ ထည်သို့မဟုတ်ယာဉ်ကတ်ကြေးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ဆံပင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
မတူညီတဲ့ဆံပင်ကတ်ကြေးတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အဲဒါကမှန်ကန်တဲ့ဆံပင်ကိုရွေးဖို့ခက်တယ်။ ထို့နောက်ကတ်ကြေးများကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကိုလေ့လာခြင်း။ ခက်ခဲတဲ့အသံ!
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကတ်ကြေးအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်။ တချို့ကထည်တွေကိုဖြတ်ရတာပိုကောင်းတယ်၊ တချို့ကျတော့စက္ကူ၊ အကောင်းဆုံးကဆံပင်ညှပ်ဖို့လိုတယ်။
ဆံပင်ညှပ်ရန်မပြုလုပ်ရသေးသောစျေးပေါသောကတ်ကြေးသို့မဟုတ်ကတ်ကြေးအသုံးပြုခြင်းသည်ဖြတ်ထားသောအပိုင်းများအတွင်း cuticle ပျက်စီးခြင်းနှင့်ကွဲပြဲခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုမှားယွင်းတဲ့ကတ်ကြေးနဲ့ဖြတ်လိုက်တာနဲ့အမျှအဆုံးတွေကကျန်းမာသန်စွမ်းနေပါတယ်။ ဆံပင်ရဲ့အဆုံးက ၁၀ ဆပိုကွဲလွယ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကသူတို့ပေါ်လာတာကိုဆက်ပြီးညှပ်ရမယ်၊ ပြီးတော့ထပ်ခါတလဲလဲစက်ဝိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
တစ် ဦး တုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားသောကတ်ကြေး ဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီးဆံပင်ကိုစိုစွတ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်၊ ဒါကိုချက်ချင်းမမြင်နိုင်ရင်တောင်
သင့်ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုမသုံးပါနှင့်၊ ဆံပင်ဖြည့်ခြင်းမှဆံပင်ပါးခြင်းသို့မဟုတ်ရက်လုပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်လူ့ဆံပင်ဖြစ်လျှင်။
တစ် ဦး ကအမြန်ဘေးထွက်မှတ်စု ဆံပင်ဖြည့်တင်းသူများအတွက်အချို့သောအလှပြင်ဆိုင်များတွင်ရက်ကန်းသားများအတွက်ကတ်ကြေးများမပါရှိနိုင်သောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ယူဆောင်လာရန် (သို့) အပ်နှံထားသောစုံတွဲတစ်တွဲရှိရန်လိုအပ်သည်။
ကတ်ကြေးများသည်စတီးဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှသင်သည်သင့်အားလက်ချောင်းများသို့မဟုတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ကသင့်အတွက်သူတို့ကိုထက်မြက်စေနိုင်သည်
Umi ဆံပင်ကတ်ကြေး: $ 99
Jaguar ဂျေး ၂ ကတ်ကြေး - ဒေါ်လာ ၁၄၉
Mina Matt အနက်ရောင် Set: $ 149
သင်သည်သင်၏ကတ်ကြေးများနှင့် ပတ်သတ်၍ တုံ့ပြန်ချက်ရှိပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်သင်၏ဆံပင်ကိုပျက်စီးစေသည့်ကောင်းသောကတ်ကြေးတစ်စုံသို့မဟုတ်ဆိုးသောစုံတွဲနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုပေးပို့ပါ။
Does Thinning Out Your Hair Make It Thicker? Thinning With Scissors